Yu Huan Machinery Co., Ltd. owandulela Ningbo Shuangyu (Samewe) computer Flat Ukwaluka Machine Umkhiqizi Co., Ltd., owasungulwa ngo-1990,
Kuyinto esibanzi imishini yokukhiqiza ibhizinisi zokuhlanganisa-R & D, ukukhiqiza, yokuthengisa and service. Njengoba isisekelo ngo-1992, besilokhu ubambisana izimboni zasekhaya eliphambili ifa eyinkimbinkimbi Equipments ukukhiqizwa futhi enamandla zesayensi ucwaningo khono
Ngo ekuqaleni 2006, inkampani wathutha base yokukhiqiza ukuze Ningbo China for ezinkudlwana ukuthuthukiswa isikhala ngokuzimisela okubukhali waqala ukukhiqiza computer Flat Ukwaluka Machines ngo 2007. Le nkampani ihlanganisa indawo ka 28000 ㎡, endaweni wokwakha 25000 ㎡ . Okwamanje, kukhona abasebenzi abangaphezu kuka-500, kuhlanganise izisebenzi lobuchwepheshe zaba ngaphezulu kuka 40%.
Ngo Sengineminyaka engu-28 , njalo shuang Yu uye banamathela abantu ngamakhasimende ngefilosofi ibhizinisi: innovating nokuthuthukisa emakethe, ukunamathela izinga ukuhlakanipha, futhi ngokuwina amakhasimende yisevisi. Siye guided njalo futhi wakhuthaza emisha, futhi etshaliwe ngokugcwele ukuqeqeshwa nocwaningo kwezobuchwepheshe kanye nokuthuthukiswa, futhi abathole eziningi ubuchwepheshe kazwelonke patent.
Manje, shuang Yu has emahhovisi esethilayithi nasemahhovisi e-India, Turkey, Vietnam kanye nezinye izingxenye zomhlaba, imikhiqizo yethu ziye zithunyelwe phesheya kwezilwandle futhi ubhekwa futhi ukunconywa ezimakethe zakuleli.
"Qhubekani uya, ungakhohlwa ingqondo saqala yakho". Esikhathini saleso senzakalo esizayo, shuang Yu uzoqhubeka banamathele endleleni "ubuchwepheshe High, high kanye ukuthembeka okusezingeni eliphezulu", ngobuchwepheshe eqinile, imishini kakhulu nokuphathwa ephelele, siyofaka imikhiqizo kangcono futhi nakho abakuthole enkonzweni amakhasimende ethu.
Ukuqamba Akupheli, Ngokuzayo angenamkhawulo. Shuang Yu abheke phambili nokuthuthukisa isandla-in-hand nawe enkazimulweni mutual!